By following the Dhamma-way, we can get the end of suffering.
မှန်ကန်သော ဓမ္မလမ်းကြောင်းဖြင့် ဆင်းရဲကင်းရာသို့ ရောက်နိုင်ကြပါစေ။
စိတ်သည်ဘာသာတရားတိုင်း၏ အဓိက ပဟေဠိနေရာမှာတည်၏.. ဆင်းရဲခြင်း ချမ်းသာခြင်းတို့၏ သော့ချက်လည်းဖြစ်၏.. စိတ်စွမ်းရည်ကို ရရှိရန်လေ့ကျင့်အားထုတ်ရာ၌ အခြားသောဘာသာတရားတို့၌ အကန့်အသတ်ရှိ၏ ထာဝရဘုရားသော်လည်းကောင်း-ဖန်ဆင်းရှင်သည်သော်လည်းကောင်း လူသားတို့စိတ်စွမ်းရည်၏ အထက်၌တည်၏။ သို့ဖြစ်၍ လူသားသည် မည်သို့သောနည်းလမ်းဖြင့်မျှ ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်တန်းတူအဆင့်ကိုမရနိုင် ၊ ဖန်ဆင်းရှင်/ ထာဝရဘုရား၏ တည်ရှိမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းမျိုးကို ကြံစည်စဉ်းစားခြင်းသည်ပင်လျှင် ပြစ်မှုလွန်ကြူးခြင်းဖြစ်နေပေပြီ ၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဤအယူအဆသည် သူတို့၏ယုံကြည်မှုဖြစ်၍ တစုံတရာ အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိ ၊ ဤနေရာ၌ကား ထိုအခြားဘာသာတရားတို့၌ စိတ်ကိုစွမ်းအားမြင့်အောင် လေ့ကျင့်ရာဝယ် အကန့်အသတ်ရှိမှုကိုသာဆိုလိုရင်းဖြစ်ပေသည်…
Posted by Pyinnyardhika Alinkara at 12:15 AM0comments
ပိုင်ဆိုင်မှုသည် အချုပ်အနှောင် (နှောင်ကြိုး) တမျိုးဖြစ်၏ ၊
ပိုင်ဆိုင်မှု ၌ ပြန်လည်ရစ်ပတ်တတ်သော ချုပ်ကိုင်ခြင်း
သဘောရှိရကား ထို အရာသည် မိမိကို ပိုင်ဆိုင်သွားပြန်၏ ၊ ဆိုလိုသည်ကား မိမိက တစုံတခုကို ပိုင်ဆိုင်လာသောအခါ တစုံတခုကလည်း မိမိကိုပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်သွားတတ်ခြင်းပင်တည်း.၊
ဥပမာ... သင်သည်ကားတစီးကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုပါစို့--သင်က ထိုကားကို ပိုင်ရှင်အနေဖြင့်ဆက်စပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ကားကလည်းသင်၏ အပိုင်ဆိုင်ခံအနေဖြင့် သင့်နှင့်ပြန်လည်ဆက်စပ်တော့၏ .. သင့်ကိုပြန်လည်ရစ်ပတ်တော့၏....
သင်၏ကား ဘယ်မှာနည်း..ဟု မေးလျှင်ထိုကားကိုညွှန်ပြရသကဲ့သို့-- -ထိုကား၏ပိုင်ရှင် ဘယ်သူလဲ-ဟုမေးလျှင် သင့်ကိုပင်ပြန်လည်ညွှန်ပြရပေလိမ့်မည်.. ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းကား--- သင် နှင့် ကားတို့၏ အကြား၌ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့် တွဲစပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်၏ .၊ ထို့ကြောင့် ပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည် ရစ်ပတ်ချည်နှောင်တတ်ရကား ကြိုးနှင့်တူ၏..။။
လွတ်လပ်လိုသူ လွတ်မြောက်လိုသူသည် ထိုကြိုးကိုဖြတ်တောက်ရ၏ ..၊ ရှင်းလင်းရ၏ ..၊
Posted by Pyinnyardhika Alinkara at 11:56 PM0comments
ဟေ့ .. ဒီမှာ သူငယ်ချင်း… မင်းဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်နေပါစေ…
မင်းရဲ့ဘာသာတရားကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်းပါ…. အခြားသောဘာသာတရားကို မစော်ကားပါနဲ့…မရှုတ်ချပါနဲ့..
Posted by Pyinnyardhika Alinkara at 12:30 AM0comments
** သာသနာ နှင့် ဒါယကာ **
စကားလုံးတို့၏ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ကိုကြည့်သော် သာသာနာ ဟူသည် အဆုံးအမ (ဆုံးမကြောင်းတရား) သွန်သင်မှု- ဆုံးမသွန်သင်ရာဌာနပင်တည်း။ ဒါယကာဟူသည် ပေးလှူသူ ထောက်ပံ့သူ။ ဤသည်ကား သာသနာ- ဒါယကာ ဟူသော အခေါ်အဝေါ်ဝေါဟာရတို့ပေးသော သာမန်ဖွင့်ဆိုချက် အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်၏။
ထိုသို့ဆိုလျှင် သာသနာသည် မည်သို့ဆုံးမသနည်း - ထိုအဆုံးအမကို အဘယ့်အကြောင့် အဘယ်သူကခံယူရသနည်း- - ဒါယကာသည် ဘာကြောင့်ပေးရသနည်း- ဒါယကာသည်ပေးရုံသက်သက်လော ဘယ်အရာတွေပြန်ရသနည်း--
Posted by Pyinnyardhika Alinkara at 9:01 AM2comments
တခုအပျက်မှာ တခုဆက်ကာဆက်ကာ ဖြစ်နေတဲ့ ခန္ဓ္ဒာ အာယတန ဓာတ် တို့ရဲ့ အစဉ်အတန်းကို သံသရာလို့ ခေါ်တာပါပဲ။။ ။။ ။။
လွတ်လမ်းရယ်မမြင် ၊ ကျွတ်တန်း ဘယ်ခါဝင်ပါ့ ၊
သံသရာ ဟိုဘက်ကမ်း ၊ မှန်းဆလို့တွေး။။။
Posted by Pyinnyardhika Alinkara at 8:26 PM0comments
Of all medicines in the world, there is none medicine like the medicine of Dhamma.
ကိုယ်နာစိတ်နာ ထိုနှစ်ဖြာအတွက် ဆရာအများ ဖော်စပ်ထားသည့်
Posted by Pyinnyardhika Alinkara at 4:00 AM0comments
သူ့မှာကြိုးစားအားထုတ်ရင်ရပိုင်ခွင့်ရှိနေတာရနိုင်လောက်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံနေတာကိုအလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်သိနေတာပါပဲ.. ဒါဟာ မိုက်ရူးရဲဆန်ခြင်းမျိုးနဲ့ကွာခြားပါတယ်..
Posted by Pyinnyardhika Alinkara at 5:22 AM0comments
Building to stay
ကောင်းကင် သမုဒ္ဒရာ နက်စွာချောက်ကြား ပုန်းအောင်းငြားလည်း မိမိပြုထား ကံတရား ကားလိုက်ငြားမကွာ ရိပ်ပမာတည်း......... There is no place to hide from evil that has done by oneself.
သုကရံ သာဓုနာ သာဓု၊ သာဓု ပါပေန ဒုက္ကရံ။ ပါပံ ပါပေန သုကရံ၊ ပါပမရိယေဟိ ဒုက္ကရံ။.. *ပြုလွယ်ရာရာ ၊ ပြုကြတာ ၊ သတ္တ၀ါသဘောပေ။ *ကုသိုလ်အမှု ၊ လွယ်စွာပြု ၊ သာဓုသူတော်တွေ။ *အကုသိုလ်မှာ ၊ သူယုတ်မာ ၊ လွယ်စွာပြုနိုင်ပေ။ *မိမိဘာပြု ၊ ကိုယ်တိုင်ရှု ၊ အမှုစစ်တတ်စေ။
" အကာ နှင့် အနှစ် "
ဆွေဂုဏ်မျိုးဂုဏ် ၊ ရာထူးဂုဏ်ကား လူ့ဘုံလောက ၊ အကာမျှတည်း ။ သူကငြူစူ ၊ မကြည်ဖြူ၍ ခွါယူလို့ရ ၊ ကွာ၍ကျ၏ ။ ............. ရိုးဂုဏ်ဖြောင့်ဂုဏ် ၊ ယဉ်ကျေးဂုဏ်ကား လူ့ဘုံလောက ၊ နှစ်သာရတည်း ။ သူကငြူစူ ၊ မကြည်ဖြူလည်း ခွါယူမရ ၊ ကွာမကျ ။ ။ဆရာဇော်ဂျီ ။ ။
2D-09: Basic Modifying Commands (Erase, Copy, Move)
collection of coqueror's cause
How to make ourselves to conquerors
kyawswarnyein.com: The Leading K Yaws Warny EIN Site on the Net
A Buddha Dhamma Library